मार्क्सवाद भनेको आफैप्रति पनि आलोचनात्मक बन्न सिकाउँछ । जबज के हो भन्ने कुरा एमाले पङ्क्तिबाट कहिल्यै सुनिएन ।
एक्काइसौं शताब्दीको जनवादको विकासमा त्रुटि के के छन् भन्ने कुरा माओवादीका नेताबाट कहिल्यै सुनिएन । यस्तो पनि मार्क्सवाद हुन्छ ? हामीले त्यसमाथि छलफल नै गरेनौँ । जबज मार्क्सवादी सिद्धान्तमाथि उभिएको छ कि छैन भन्ने विषयमा जुन छलफल चाहिन्थ्यो, त्यो हामीले गरेनौँ । एक्काइसौँ शताब्दीमा जनवादको विकास भन्नेमा हामीले केही प्रस्तावना राख्याँै । त्यो माथि छलफल नै भएन । आफैले अगाडि ल्याएको सिद्धान्तप्रति आफै इमानदार नभए स्वाभाविक रूपमा त्यसले विकृति ल्याउँछ ।
जस्तै, नेता भेट्दा उनीहरु नेताका विचार र कुराबाट मात्र प्रभावित हुँदैनन् । उनीहरु त नेताको छोरी घरबाट निस्कन्छन् । उनीहरू केमा आउँछन्, केमा जान्छन् । सवैतिर चियाउँछन् । नेताकाेमा को भेट्न आउँछ, को जान्छ, सबै कुराको ख्याल गरिरहेका हुन्छन् । त्यसबेलामा उनीहरुले कुनै व्यपारी एउटा पोको लिएर गएको कार्यकर्ताले देखे भने नेताले गरेका सबै भाषण बिर्सन्छन् ।
त्यसकारण पहिलो स्कुल भनेको त्यही हो । स्कुलिङ भनेको हामीले के लेख्छाँै, के बोल्छाँै भन्ने मात्रै हैन, हामी के गर्छौं, त्यो पनि हो । जस्तो; हामीसँग विमति राख्ने मान्छेसँग कति मिल्छाँै ? युनिर्भसल कुरा जस्तो छ, तपाईं जति शासन गर्न चाहनु हुन्छ, त्यति शासन तपाईंको टिक्छ । संसारमा कडा चिज चाँडै भाँचिन्छ । विध्वंशको आवाज हुन्छ । रूख ढल्दा आवाज आउँछ तर रुख बढ्दा आवाज आउँदैन ।
रातोपाटी अनलाइनसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश ।